Ngesikhathi sethu, yenza izinhlama zibukeke njengezimhlophe. "Ukuphila kuyinkimbinkimbi" i-9 ifuna ukuguqulwa ukuze ibe yi-6 futhi i-6 ifuna nokuba i-9. Funda kabanzi
Eyakhelwe ukusiza abalimi nabantu emazweni asathuthuka, i-Time yindawo esetshenzisiwe, inikwe amandla amandla elanga angasiza ukugcina imikhiqizo emisha fresh. Funda kabanzi
Lo mnikazi unikeza lesi sigqila kumfowabo, uFerréol Beaumont Béliers, futhi ongumnikazi eSainte-Suzanne futhi onothando nge-botany. UFerréol Beaumont Béliers umenza umlimi wakhe ... Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Juni 23, 2018 00: 20 Awekho amazwana
Futhi uFranco Macky Sall, umongameli waseSenegal, uqala lo msebenzi othi "High Speed ​​Train" ezweni lakhe, uzokwenza ukuthi zenziwe eFrance. "Ingxabano ivulekile! Ezimweni ezimbili, i-ini ... Funda kabanzi